Ubusazi? Nazi ezinye izinto ezonwabileyo, ezinomdla kwaye ngamanye amaxesha ezinobungqina bezakhemikhali ezinomdla.
Ngaba uyazi ... awukwazi ukunambitha ukutya ngaphandle kwemali.
Ngaba uyazi ... kunokwenzeka ukuba ugula okanye mhlawumbi ufe ngokusela amanzi amaninzi .
Ngaba uyazi ... i- oksijeni ekhoyo iluhlaza.
Ngaba uyayazi ... isilinganisi seentlanzi sisisithako esifanayo somlomo.
Ngaba uyayazi ... enye i- lipstick iqukethe i-acetate ekhokelayo okanye iswekile yesikhokelo. Le ngxube yebhodi enetyhefu yenza i-lipstick ibe mnandi.
Ngaba uyayazi ... ukudubula okuqhelekileyo kwe-espresso iqukethe i-caffeine encinci kunekhofu efana neyoko.
Ngaba uyazi ... I-Coca Cola ekuqaleni yayiqukethe i-cocaine.
Ngaba wayazi ... i-lemons iqulethe i-sugar sugar ngaphezu kwama-strawberries, ngokuba ubunzima obufanayo.
Ngaba uyazi ... i-lobster igazi ayibalabala uze ivuleleke emoyeni. Emva koko igazi libonakala liluhlaza .
Ngaba uyayazi ... amehlo e-goldfish aqondanga kuphela umbala obonakalayo, kodwa kunye nokukhanya kwe- infrared kunye ne- ultraviolet .
Ngaba uyayazi ... xa ubhafisa amanzi esetyu okanye amanzi olwandle ngokukhawuleza, ufumana iqhwa elitsha lamanzi. I-Icebergs yamanzi aphelileyo, nangona kunjalo, ngenxa yokuba zivela kuma-glaciers, ezenziwe ngamanzi amanzi (ikhephu).
Ngaba uyayazi ... ukuba utyhila iglasi yamanzi ukuze ubeke indawo, yayiza kubilisa kunokuba iqhwa. Nangona kunjalo, umphunga wamanzi wawuza kukhwela kwiqhwa emva koko.
Ngaba wayazi ... iqanda elitsha liya kuhlamba ngamanzi amanzi. Iqanda elisezantsi liya kuhamba.
Ngaba uyayazi ... iphepha lodonga ekamelweni likaNapoleon lalidaywe kunye ne-Scheele's Green, eline-copper arsenide. Ngomnyaka we-1893 umthambo wezinto eziphilayo zaseNtaliyane uGosio wathola ukuba iphepha lodonga eliqukethe i-Scheele's Green lavumela ukuba isikhunta sitshintshe i-arsenide yobhedu ibe ngumpu we-arsenic enetyhefu. Nangona oku akuzange kube yimbangela yokufa kukaNapoleon, ngokuqinisekileyo akunakunceda impilo yakhe!
Ngaba uyazi ... uhambo oluvakalayo 4.3 amaxesha ngokukhawuleza emanzini kunomoya. Ewe, ayihambanga ngophulo kuyo yonke into.
Ngaba uyayazi ... malunga ne-78% yomlinganiselo wengqondo yomntu aqukethe amanzi.
Ngaba uyazi ... ama-macadamia amantongwane ayingozi kwizinja.
Ngaba uyayazi ... isiteleka sombane singasifumana ukushisa kwama-30,000 degrees Celsius okanye 54,000 degrees Fahrenheit.
Ngaba uyayazi ... umlilo uvakala ngokukhawuleza ukukhuphuka ngokukhawuleza kunokugqithisa. Oku kungenxa yokuba ubushushu buchaphazela izinga lokushisa. Ummandla ophezulu ngaphezu komlilo uvame ukushisa kunommandla ongaphantsi kwalo, kunye kunye unokufumana umoya ongcono.
Ngaba uyazi ... amaxoxo akakufuneki ukuba asele amanzi kuba angayifumana ngesikhumba. Ngakolunye uhlangothi, abantu banamaprotheni angena emanzini ukuze bancede ukukhusela ukulahleka kwamanzi.
Ngaba uyayazi ... i-khemikhali enzima kakhulu emzimbeni wakho yinto yamaoli akho enyo.
Ngaba uyayazi ... umchamo uphahlaza okanye uphonya phantsi kwe-ultraviolet.
Ngaba uyayazi ... iiparele, amathambo namazinyo ziya kutshabalala kwiviniga, equlethe i-acetic acid.
Ngaba uyayazi ... igama likhemikhali yamanzi yi-dihydrogen monoxide .
Ngaba uyayazi ... unokwandisa ubomi beemigangatho yeerubha ngokuwagcina kwifriji.
Ngaba uyayazi ... i-ethylene igesi eveliswa yi-apple yokuvuthwa ivuthisa ezinye iiplesa kunye nezinye iindidi zemveliso.
Ngaba uyayazi ... amanzi ahamba malunga ne-9% xa ikhupha kwiqhwa.
Ngaba uyayazi ... iMars ibomvu ngenxa yokuba ubuso bayo buqulethe ininzi ye-oxide okanye i-rust.
Ngaba uyayazi ... ulahlekelwe malunga ne-1% yamanzi omzimba wakho ngexesha lova unxaniwe.
Ngaba uyayazi ... unayo i-chemoreceptors okanye i-taste buds ngaphakathi kwehlathi lakho kunye nolwimi lwakho.
Ngaba uyazi ... kunokwenzeka ukuba amanzi ashushu atshabalalise ngokukhawuleza kunamanzi abandayo.
Ukuguqula ukunyuka kwiiNgxenye kwiiMillion Isixazululo
I-Predicate yeSpanishi nesiNgesi
Mayelana ne-Arad Design for National 9-11 Memorial
10 Amazwi malunga noMaasaura, 'uMama omuhle Dinosaur'
Inkcazelo Yezenzo Zokudala - Umsebenzi Oqala Ngo-A